Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO oo digtay in halista Covid-19 ay ka diri doonto mustaqbalka dhaw
5 days ago allbalcad
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ka digaysa in halista Covid-19 ay ka darraan doonto mustaqbalka dhaw sidii ay ahayd markii uu dilaacay cudurku lix bilood ka hor.
Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in fayrasku uu ku dhici doono dad badan hadii aan dawladuhu bilaabin in ay dhaqan geliyaan siyaasado haboon.
Wuxu sheegay in dulucda farriintiisu tahay “baadhitaan, la socod iyo karantiimayn.”
In ka badan 10 milyan oo qof oo dunida oo dhan ah ayuu cudurku ku dhacay tan iyo markii cudurku ka dillaacay Shiinaha dabayaaqadii sannadkii hore.
Tirada dadka u dhintay ayaa haatan kor u dhaaftay 500,000.
Kala badh dadka uu ku dhacay cudurku waxay ku nool yihiin Maraykanka iyo Yurub laakiin haatan Covid-19 wuxu aad ugu sii fidayaa labada qaaradood ee Ameerika.
Fayrasku waxa uu sidoo kale saameeyey koonfurta Aasiya iyo Afrika, halkaas oo la filayo inuu halka ugu sarraysa gaadho dhamaadka bisha Juulaay.
Dr Tedros ayaa Isniintii ka sheegay shir uu kaga qayb galay internet-ka oo yidhi ‘ dhamaanteen waynu doonaynaa in cudurkani dhamaado. Dhamaanteen waxaynu doonaynaa in nolosheenu caadigii ku soo noqoto laakiin xaqiiqada aan la dafiri karini waxa weeyi in aanu dhakhso u dhamaanayn. In kasta oo dalal badani wax wanaagsan sameeyeen, hadana marka la eego guud ahaan dunida runtii aad buu u fidayaa”.
Waxaanu intaa ku daray ‘mar hadii tirada dadka uu ku dhacay ay marayso haatan 10 milyan iyo nus malyuun qof oo u go’ay, hadii aan wax ka qaban weyno dhibaatada aan WHO ahaan tilmaanay oo la waayo in wadammada iyo duniduba is kaashadaan oo sidaa dunidu u sii kala qaybsanaato taasina fiditaanka fayraska durba gacan siinayo, waxa xaqiiqo ah in musiibo weyni soo fool leedahay”.
‘ Way igu adag tahay in aan idhaa laakiin marka aan eego duruufaha jira iyo sida loo dhaqmayo waxaan ka cabsi qabaa in tii u xumayd dhici doonto” ayuu yidhi.
Waxa uu sidoo kale ku tirtirsiyey dawladaha in ay ku daydaan Jarmalka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo cudurka ku xakameeyey siyaasado ay ka mid yihiin in dadka laga wada baadho cudurka iyo sidoo kale in lala socdo dadka laga helo.
Previous Madaxweynaha Soomaaliya oo Shacabka Iyo Xukuumadda Soomaaliyeed ugu Hambalyeeyey Guusha Diblumaasiyeed ee Hoggaaminta Golaha Guud ee QM
Next Midowga Yurub oo diiday in looga soo dhoofo Dalalka Maraykanka iyo Shiinaha